» राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जिताउन
नेकपा (मसाल) को अपिल
जातिवादीहरूले जातीय प्रकारको संविधानको निर्माण गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । मधेशवादीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश एक प्रदेश वा १÷२ वटा भए पनि तराईका छुट्टै प्रदेशहरूको निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन् । संविधान सभामा जातिवादी वा मधेशवादीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विजयी भए र जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्यो भने राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । एमाओवादीले पनि जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूसित गठबन्धन गरेकाले जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारका संविधान बन्ने खतरा धेरै छ । राजमोले त्यस प्रकारको सम्भावनाका विरुद्ध अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । त्यसैले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्न नदिन, त्यसबाट देशलाई टुक्रिन नदिन र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको विजय राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ ।
सङ्घीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, वहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिका विरुद्ध अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको शक्ति राजमो नै हो । त्यसकारण संविधान सभामा राजमोको वलियो उपस्थितिले नै सङ्घीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य समेतका अवधारणाहरूका कारणले सम्भावित जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको खतरालाई रोक्न सकिनेछ । नेपाल विभिन्न जात÷जाति, जनजाति, भाषाभाषी जनताको मेलबाट बनेको एउटा नेपाल राष्ट्र हो । तर माओवादी र अन्य कतिपय पक्षहरूले देशका सबै जाति वा जनजातिहरूलाई वेग्ला वेग्लै राष्ट्रहरूको रूपमा व्याख्या गरेर नेपाललाई वहुराष्ट्रिय देश बताउँछन् । त्यसका साथै एमाओवादीले ती सबैलाई पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । त्यसको अर्थ हो– उनीहरूले नेपालका सबै जात÷जातिहरूलाई नेपालबाट स्वतन्त्र हुन सक्ने अधिकार हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् । त्यो स्पष्ट रूपले राष्ट्रिय विखण्डनको नीति हो । राजमोले त्यस प्रकारको नीतिको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दै आएको छ ।
देशका अन्य कैयौँ प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूले प्रशासनको आड, पैसा, भोजभतेर, गुण्डागर्दी आदिका वलमा चुनाव जित्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । जुन शक्तिहरूले त्यसरी भ्रष्ट र गैरराजनैतिक तरिकाहरू अपनाएका छन्, उनीहरूलाई वहुमत वा दुई–तिहाई वहुमत प्राप्त भयो वा संविधान सभाको चुनावमा उनीहरूले महत्वपूर्ण विजय प्राप्त गरे भने देशमा पहिलेको जस्तै इतिहास दोहोरिने, देशमा पुनः अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुने वा गम्भीर प्रकारका दुर्घटनाहरू हुने सम्भावना रहनेछ । निर्वाचन आयोग पनि त्यस प्रकारको भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाहरू रोक्न असफल भएको छ । राजमोले त्यस प्रकारका भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाहरूको विरोध गर्दै आफ्ना नीति र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक रूपले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिँदैछ । भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाले चुनाव जित्ने राजनैनतिक दल वा सङ्गठनहरूले चुनाव जितेर सरकार बनाए पनि उनीहरूद्वारा सही र स्वच्छ प्रशासन र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सम्भव हुने छैन । त्यसैले त्यस प्रकारले भ्रष्ट र गैरराजनीतिक तरिकाहरू अपनाउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई पराजित गरेर राजमोका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाएपछि नै देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानु सम्भव हुनेछ ।
राजावादीहरूले बढी सफलता प्राप्त गरेमा गणतन्त्र समाप्त हुने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा बढ्नेछ । अहिले राजावादीहरूले हिन्दू धर्मको कुरा उठाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । राजावादीहरूले चुनावमा उनीहरूले दावी गरे जस्तो सफलता प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा हुनेछ । मधेशवादीहरूले बढी सफलता प्राप्त गरेमा देशको विखण्डनको खतरा बढ्नेछ । माओवादीले बढी सफलता प्राप्त गरे लोकतन्त्र समाप्त हुने, देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने र गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुने खतरा बढ्नेछ । एमाओवादीले जातिवादी र मधेशवादी समेतसित गठबन्धन गरेर दुई–तिहाई वहुमत प्राप्त गर्न अभियान चलाइरहेको छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको अभियान सफल भएमा देशमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्ने तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्नेछ । एमाओवादीको कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीबाट देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा पैदा हुनेछ । त्यसकारण अहिले कसको कति शक्ति छ भन्ने आधारमा होइन, कसको नीति कति गलत वा सही छ ? त्यो आधारमा नै कुनै राजनैतिक पार्टी वा सङ्गठनका उम्मेदवारहरूलाई भोट दिने वा नदिने निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसरी हेर्दा राजमोले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका नीति र त्यसको राजनीतिक भूमिकामाथि ध्यान दिँदै त्यसलाई ठूलो सङ्ख्यामा विजयी बनाउनु नै देश र जनता तथा देशको भविष्यका लागि सबैभन्दा सही कार्य हुनेछ ।
गत कालमा अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुनु, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नभैकन संविधान सभाको विघटन हुनु कतिपय राष्ट्रघाती सन्धिहरू वा नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेश वा कानुनहरू बन्नु, निर्दलीय सरकारको गठन हुनु, देशमा सङ्घीयतावादी सोचाइ वा गतिविधिहरू बढेर जानुका पछाडि एमाले र ने.का. का गलत नीतिहरू पनि धेरै नै जिम्मेवार छन् । त्यसकारण चुनावमा उनीहरूलाई मिल्ने सफलताबाट गत कालको जस्तो स्थिति दोहोरिने सम्भावना रहनेछ । तर अहिलेको देशको राजनैतिक स्थितिमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा एमाओवादी, मधेशवादी र जातिवादी गठबन्धनबाट नै सबैभन्दा बढी खतरा छ । त्यसकारण हाम्रो मुख्य जोड त्यो गठबन्धनका कारणले पैदा भएको खतरालाई रोक्ने वा उनीहरूलाई दुई–तिहाई वा वहुमत आउन नदिनेतर्फ नै हुनु पर्दछ ।
एमाओवादी हाम्रो नजिकको मित्रशक्ति हो । तर त्यसले जुन प्रकारको जातिवादी नीति अपनाएको छ, जातिवादी र मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गर्ने नीति अपनाएको छ, नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती नीतिहरू अपनाएर देशलाई फिजीकरणको बाटोमा लैजाँदैछ, भारतपरस्त नीति अपनाएर देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर प्रकारको आँच पु¥याउने काम गरिरहेको छ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीबाट देशलाई अधिनायकवादतिर लैजाने प्रयत्न गर्दैछ, राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो पैमानमा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको नीति अपनाएको छ, मानवअधिकारको हनन वा अपराधजन्य कारवाहीहरूका लागि दोषी व्यक्तिहरूलाई बचाउन प्रयत्न गर्दैछ, उनीहरूको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले वहुमत वा दुई–तिहाई वहुमत प्राप्त गरेमा त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको कुठाराघात पुग्नेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । त्यो सम्भावनाप्रति दूरदर्शितापूर्वक विचार गरेर मतदान गर्न हामीले जनतासित अपिल गर्दछौँ ।